DARAASAD: Naac Naacu Waxa Uu Leeyahay Dhadhan Macaan Iyo Waxtar Caafimaad - Daryeel Magazine
Inkasta oo ereyga naac naac uu yahay Carabi hadana dadkeenu isaga ayay adeegsadaan.Geedka naac naacu waa geed aad u udgoon oo siyaabo kala duwan loo isticmaalo.
Naac naacu waxa uu u keena cuntada lagu diro ama cabitaanka dhadhan macaan iyo udgoon oo aan caadi ahayn iyada oo ay dheertahay faa’iidada uu caafimaadka u leeyahay sidan waxa sheegtay war bixintan.
Xarunta warbaahinta u qaabilsan macaamiisha Germal ka ee loo soogaabiyo(EDI) ayaa waxa ay sheegtay in naac naacu uu gaar ku yahay dhayitaan tayo le oo dabiici ah, sabab too ah waxa uu ka samaysan yahay saliida’’volatile oils ’’ee dhirta laga helo, gaar ahaan ’’ Alsceniol iyo menthol’’ka.
Waxa ay ka caawisa sida ay war bixintan daraasadu ay dheegtay la dagalaanka jidhiidhicada muruqyada ku dhacda,madax xanuunka iyo ciladaha kuyimaada howsha dheef-shiidka (digestive) ka.
Kasakow faa’iidooyinka caafimaad ee uu lee yahay naac naacu war bixinta xaruntani waxa ay ka digtay in si xad dhaafa loo isticmaalo naac naaca,sabab too ah bay tidhi war bixintu isticmaalka badan ee maadada ’’menthol’’ ku waxa ay dhaawacdaa xuubka caloosha.
Caleenta naac naaca cuntada lagu daro badhkeed waxa ay u keentaa dhadhan aad u macaan,sida salaadka,khudrada,hilibka adhiga,badhaadhaha,nacnaca laga sameeyo caanaha iyo wixii la halmaal ee xoolaha laga saaro.
Xaruntan ayaa waxa ay xaqiijisay in caleenta naac naaca ah ee darayga aanan lagu karin cuntada si uunan u baabi’in udgoonka gaarka ah ee ay leedahay ,waxana ay ku talisay war bixintu in caleenta naac naaca lagu daro cuntada kadib marka la kariyo.
Cunista Badan Ee Hilibka Adhigu Waxa Uu Sababaa Dhibaatooyin Caafimaad